Sa’udiifi Yamanitti lammiileen Itoophiyaa sababii koroonaavaayirasiin balaaf saaxilamaa jiru – Kichuu
HomeNewsAfricaSa’udiifi Yamanitti lammiileen Itoophiyaa sababii koroonaavaayirasiin balaaf saaxilamaa jiru
(bbcafaanoromoo)—Dhaabbtni Godaantota Addunyaa Saaw’udii fi Yamanitti lammiileen Itoophiyaa sababii koroonaavaayirasiin balaaf saaxilamaniiru jedhe.
Lammiileen Itoophiyaa naannoo Saa’udii fi Yaman jiraatan torbee darbe BBCtti haasa’an haleellaa Huuttiin isaan irra qaqqabsiiseen adda adda faca’uun himanii turan.
Itti gaafatamtuun Kooninikeeshiniin Dhaabbata Godaantotaa Addunyaa Hedoon Oliviyaa dhaabbatni isaanii dhimma kana akka beekuufi akka isa yaadeessus BBCtti himaniiru.
Godaantoti gammoojii keessa faca’anii jiran lakkoofsi isaanii sirnaan beekamuu baatus kuma shan kan tahan Yaman iddoo Sa’aadaa jedhamurraan gara Saa’udii ce’uuf yoo jedhan shakkii koroonaavaayrasiin qabamuun muddama keessa seenanii jiru.
Itti gaafatamtuun kun akka jedhanitti naannichi lafa sochiin loltootaa jiru dha.
Godaantonnis loltoota mootummaa fi finciltoota Huuttii gidduu waraanni guyyuu gatii jiruuf dhukaasa dhagahaa oolla kanaanis yaaddoo keessa jirra jedhu godaantonni.
BBC’n godaantota naannoo Yaman kan balaa irra jiru jedhaman dubbisuuf yaalii taaisuus bilbilli hojjechuu hin dandeenye.
Torbee tokko dura godaantotni 4000 tahan isaan keessaa Saa’udiitti ce’uu yoo himanillee isaanis mana hidhaa keessa jiraachuu dubbatu.
Godaantonni kunneen sababii waraanaaf otoo hin taane kan yaaddoo irra bu’an. Koroonaavaayirasii ni tamsaastu sababii jedhuun malee.
Waraanni finciltootaa fi mootummaa Saa’udii jidduu jiru dhaabbachuuniifi vaayirasii qabaachuun shaakkamuun isaanii yaaddoo godaantotaa hin hir’isuu jedhu itti gaafatamtuun koominikeeshinii dhaabbatichaa.
Hedoon Oliiviyaa dhaabbatni isaanii qaamota dhimmichi isaan ilaallatu waliin tahuun sirriitti maaltu tahaa akka jiru ni qorata jedhaniiru.
Kanamlees, godaantota qollifachuun akka dhaabbatuufi biyya gahan maratti vaayirasicha to’achuuf tarkaanfiin fudhatamu marti lammummaafi seera qabeessummaa isaanii otoo hin gaafatiin isaaniins dabalachuu qaba jedha.
Haleellaa naannichatti taasifamaa tureenis godaantotni muraasni hin du’uun akka hin hafne maddeen himan jiru.
Yamanitti koronnavaayirasiin argamiuun kan gabaafame torbee darbe keessa ture.
Voluntary Humanitarian Return (VHR): Aden https://t.co/XmewPs9Yr6 pic.twitter.com/56ySozB8B8